Astaamaha Ben Passer
Kii ugu dambeeyay Warbixinta Guddiga Isbadalka Cimilada (IPCC). xaqiijiyaa waxa bulshooyinka adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan halkan Midwest, waxay yaqaaneen tobannaan sano: isbeddelka cimiladu waxay saameynaysaa nolosha balaayiin dad ah oo adduunka ah - abuurista carqalado khatar ah oo si adag u saameeya bulshooyinka aan kheyraadka haysan. Inta badan, isla beelahan ayaa laga tagay wadahadal ku saabsan xalalka. Furaha abuurista mustaqbal loo siman yahay oo cadaalad ku dhisan waa in la hubiyo in codadkoodu yahay mid hore iyo xarun.
Bishii Febraayo 2022, Ben Passer oo ka tirsan McKnight Foundation wuxuu qayb ka ahaa dhacdo la yiraahdo "Xalka Cimilada ee Midabka: U Gudbida Micna ee Geesiyaasha Cimilada ee Aan La Soo Bandhigin," qayb ka mid ah Taxanaha Xalka Cimilada ee Bandhiga Weyn ee Waqooyiga. Munaasabadda ayaa diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay in la abuuro meelo badan oo kala duwan, sinnaan ah, loo wada dhan yahay, oo kaliya oo loogu talagalay xalalka cimilada.
Dhacdada ku hadasha (bidix ilaa midig) waxaa ku jiray Matt Scott oo leh Hoos u dhigista Mashruuca, Clara Kitongo oo leh Geed Pittsburgh, Ben Passer oo leh McKnight Foundation, iyo Jacqueline Patterson oo leh Chisholm Legacy Project.
Kuwa soo socdaa waa qayb ka mid ah wada sheekeysiga Ben Passer uu la yeeshay Matt Scott oo ka socda Project Drawdown, oo loo tafatiray si dherer ah oo hufan. Waxaad sidoo kale daawan kartaa duubista dhacdada oo buuxda, kaas oo ay ku jiraan iswaydaarsi firfircoon oo dhex mara dhammaan kuwa ku hadla.
Waa maxay sheekadaada cimiladu?
Sheekada cimiladu waa mid muujinaysa, tijaabin, iyo waayo-aragnimo. Markii aan yaraa, waxaa la ii baray cimilada iyo arrimaha deegaanka iyada oo la ii soo bandhigay waxyaabo ay ka mid yihiin tignoolajiyada cusub. Waxaan xasuustaa inaan arkay xayaysiis loogu talagalay gaadhiga unugga shidaalka hydrogen-ka markii aan ku jiray fasalka koowaad ee kulliyadda oo aan u malaynayay inay tahay waxa ugu qabow abid. Waxa aan iska diiwaan galiyay dugsiga sharciga aniga oo aan gabi ahaanba garanayn meesha aan isku arkay shaqada, laakiin shaqalaha aan hadda ku dhacay waxa ay u janjeeraan dhanka tamarta iyo arrimaha deegaanka.
Kadibna, 2016-kii, Philando Castile waxaa la dilay meel wax u jirta gurigaygii carruurnimada. Markii ugu horeysay ee noloshayda, waxaan dareemay isku dhacan jinsiyadeed iyo goobta - waxaanan ogaa in wax kasta oo aan noloshayda ku sameeyo ay tahay inaan wajaho tan. Markaa waxaan odhan lahaa sheekadayda cimiladu, iyo waxa runtii igu dhiirigeliyay inaan qabto shaqada aan qabanayo, waa inaan arkay xaalada aduunka iyo nidaamyada aynu abuurnay, anagoo arkayay in wax isbedeli karaan, laakiin sidoo kale ogaanshaha qof kastaa maaha. ayaa ka faa'iidaysan doona isbeddelladaas ilaa aynaan ula kac ahayn iyaga.
Si daacadnimo ah, markii aan bilaabay shaqadan, ma aan isku arkin inaan ku jiro. Dhaqdhaqaaqa deegaanka iyo cimiladu waxay muddo dheer la halgamayeen kala duwanaanshaha jinsiyadeed iyo ka mid noqoshada, waxaana dareemay in gacanta koowaad. Sida jinsiyad isku dhafan-badh madow, badh cad-rag ah, waxaan muddo dheer la halgamayay aqoonsigayga jinsiyadeed, ka soo koray xaafad inta badan caddaan ah oo ka mid ah Magaalooyinka Mataanaha, ilaa deegaan waxbarasho oo sii caddaanayay markii aan raacay shahaadooyin sare. Tani waxay sidoo kale ahayd run markii aan bilaabay shaqadayda qayb ay inta badan horseedaan doodaha tignoolajiyada iyo natiijooyinka xogta horseedka u ah. Ma aha in la yiraahdo kuwaas asal ahaan waa xun yihiin ama khaldan yihiin, dabcan, laakiin waxaan filayaa in waxa maqani ay ahayd diiradda saarista xalalka dadka. Sidee buu isbeddelka cimiladu u saameeyaa bulshooyinka midabka si ka duwan? Maxaan sameyn karnaa oo aan sameyn karnaa si aan u hubinno in faa'iidooyinka ay si dhab ah u gaaraan bulshooyinkaas? Kuwani waa wada sheekaysiyadii aan dareemay inaan u baahanahay inaan ka mid noqdo, la'aantoodna, runtii ma dareemin inaan ka tirsanahay.
Waa maxay doorka sheekooyinka si ballaadhan?
Sheeko-sheegiddu runtii waa muhiim. Waa in aan u fiirsadaa waxyaalaha dadka ka farxin doona, iyo sheekooyinka waayo-aragnimada dadka ee u sahlaysa in ay isku arkaan arrimaha iyo xalalku waa waxa keenaya isbeddelka. Taasi waa waxa naga fogaan doona dhibcooyinka xogta ee aan la heli karin iyo doodaha tignoolajiyada nuanceed si loo helo saameyno la heli karo iyo faa'iidooyinka dadka. Kaliya waa inaan u sheegnaa sheekooyinka cimilada ee dadka, gaar ahaanna aan kor u qaadno sheekooyinka kuwa taariikh ahaan laga saaray. Sheekooyinku waxay u keenaan dad cusub wada hadalka, taasina waa sida aan u xallin doonno isbeddelka cimilada. Dhowr meelood oo wanaagsan oo laga heli karo sheekooyinka cimiladooda gaarka ah ee dadka waa Jiil Cimilada iyo Hoos u dhigista Mashruuca.
Maxay caddaaladda cimiladu adiga iyo bulshada aad la shaqaynaysaa muhiim ugu tahay?
Aniga ahaan, caddaaladda cimiladu waa arrin sababtoo ah bulshooyinka sida weyn uga faa'iideysanaya ficilka cimiladu waa isla bulshooyinka taariikh ahaan laga saaray oo waxyeello u geystay nidaamyada, ha ahaato ula-kac la'aan si loo hubiyo in qof walba baahidiisa la daboolo, ama ujeedo xun. si loo waxyeeleeyo ama loo bahdilo beelaha qaar, kuwa kalena loo ilaaliyo.
Kala duwanaansho la'aanta, sinnaanta, isku-darka, iyo caddaaladda ayaa si fudud u waari doonta arrimaha maanta ina horyaalla. Doorashooyinka iyo go'aammada siyaasadda sida dib-u-habaynta waaxda guryeynta, fadhiisinta iyo ka shaqaynta xarumaha warshadaha iyo goobaha qashinka, dhismaha nidaamka waddooyinka federaalka, ayaa dhammaantood lagu sameeyay kharashka bulshooyinka iyo bulshooyinka midabka leh, kuwaas oo leh saamayn waarta ilaa maantadan la joogo. Waqtigan xaadirka ah, ma haysanno fursad kaliya laakiin waa waajib inaan si firfircoon u joojinno wareeggaas, oo aan bilowno inaan beddelno dhaqamadeenna taariikhiga ah si aan u horumarinno mustaqbal firfircoon oo qof walba ah.
Sideed uga shaqaynaysaa sidii aad u joojin lahayd isbeddelka cimilada?
Markay tahay McKnight waxaan ku faraxsanahay in aan taageero shaqada hay'ado badan oo ku yaala Galbeedka Dhexe kuwaas oo ka shaqaynaya in ay wax ka beddelaan nidaamyada oo ay si weyn u yareeyaan wasakhowga kaarboonka ee gobolkeena 2030. Waxa aanu ballan qaadnay hadaf deeq-bixineed sannadle ah oo ah $32 milyan sannadkii, laga bilaabo sanadkaan. Waad awoodaa ka akhri wax badan oo ku saabsan barnaamijkayaga Cimilada boggayaga internetka, laakiin afartayada xeeladood ee ugu waaweyn waa beddelka qaybta korontada, korontaynta dhismayaasha iyo gaadiidka, kaarboonka ku wareejinaya dhulalka shaqada, iyo xoojinta ka qaybgalka dimoqraadiyadda, hadaf la wadaago annaga. Barnaamijka Bulshooyinka Firfircoon iyo Sinaanta. Waxaan inta badan ka hadalnaa labadayada "khdadka" ee ugu muhiimsan ee ururka McKnight: waaritaanka iyo sinnaanta. Waxaan runtii ka shaqeyneynaa inaan kuwan ku horumarinno dhammaan shaqadayada, iyo dhammaan shaqada aan taageerno.
"Waxaan haysanaa fursad aan ku abuurno isbeddel cadaalad ah oo ugu horreeya taariikhdeena." —BEN PASSER, SARE EE BARNAAMIJKA, Cimilada & Tamarta Bartamaha-galbeed
Shaqaalaha Horumarinta Awoodda Beesha ee Dhaladka ah ayaa ku rakibay qorraxda korkeeda Xarunta Dawladda ee Red Lake Nation. Xuquuqda Sawirka: Robert Blake
Maxaa ka mid ah fursadaha aad aragto?
Isbeddelka cimilada, waxaan haysanaa fursad aan ku abuurno isbeddelka ugu horreeya ee sinnaan iyo caddaalad ah ee noociisa ah. Nasiib darro waxaan haynaa tusaalooyin badan oo dadka laga saaray xilliyada isbeddelka isbeddelka-laakin kuma hayno tusaalayaal isbeddel dhab ah oo loo siman yahay taariikhdayada. Waxaan haysanaa fursad aan ku bedelno taas.
Helitaanka si gaar ah, waxaa jira fursado badan oo xagga tamarta iyo cimilada oo aan ku faraxsanahay. Dhismayaasha koronto-siinta waxay kaa caawin karaan yaraynta wasakhowga hawada gudaha, yaraynta natiijooyinka caafimaadka xun sida neefta oo si aan simanayn u saamaysa carruurta midabka leh. Beddelidda nidaamka tamarta waxay ka caawin kartaa bulshooyinka inay maalgashadaan tamarta la cusboonaysiin karo oo ay ka guuraan noocyada wasakhaysan ee tamarta tamarta. Iyo hubinta in dadku ay helaan noocyo kala duwan oo gaadiid koronto leh, hadday yihiin baabuur koronto ah ama basaska gaadiidka dadweynaha ee korontada ku shaqeeya, waxay hagaajin karaan tayada hawada waxayna gacan ka geysan karaan badbaadinta lacagta mustaqbalka fog.
Aniga ahaan, runtii waxay ku dhacdaa ula kac. Si loo xaqiijiyo sinnaanta iyo cadaalada xalalka cimilada, waa in aan si ula kac ah ugu darnaa bulshooyinka aan kheyraadka haysan, bulshooyinka midabka leh, iyo dadka kale ee taariikh ahaan laga reebay habka iyo natiijada labadaba. In dadka la siiyo kursi miiska waa bilow muhiim ah, laakiin kuma dhammaan karto halkaas. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in codkooda lagu daro go'aan kasta oo la gaarayo, oo ay ugu dambeyntii arkaan faa'iidooyinka. Sidoo kale, si loo hubiyo in natiijadu ay dhab ahaantii faa'iido u leedahay qof kasta, waxaa muhiim ah in lagu daro dadka bilawga ah, maahan dambe ee habka ama sida ka dib.
Doorkee ayay kuwa kale ka ciyaari karaan horumarinta cadaalada cimilada?
Ka qayb qaado, qaab kasta oo qaadata: tabaruc, ku deeq, la hadal asxaabtaada, asxaabta, iyo qoyskaaga. Laakin sidoo kale, dulucda sheekadeena maanta, dhagayso oo noqo mid ula kac ah. U heellan sidii aad u hubin lahayd in codadka aan la soo bandhigin ay qayb ka yihiin, oo hoggaaminayaan, wada hadalka. Haddii aad ku sugan tahay meelo bannaan oo dadka laga saaray ama aan lagu maqlin, hadal. Naftaadana u hur inaad barato, ama aad wax ka barato, sida cimilada, jinsiyadda, iyo arrimo kale oo badan ay isugu xidhan yihiin, iyo doorka aynu dhammaanteen ka qaadan karno abuurista adduun caddaalad iyo sinnaan leh oo qof kastaa ku horumari karo.